[History is written by the winner of the last war.] ”ဆိုတဲ့အဆိုအမိန့် တစ်ခုကို လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်လောက်က တစ်နေရာမှာကျနော်ကိုးကားခဲ့ဘူးပါတယ်။ [ပါမောက္ခမိုက်ကယ်အောင်သွင်ရဲ့ Myth and History – Univ. of Hawaii- 1992] စာအုပ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကဏ္ဍပါ(ဒေါ်)အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ န၀တဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ အားပြိုင်ပွဲ အကြောင်းသူ့ သုံးသပ်ချက်ကိုကျနော်က(မြန်မာလို)ထပ်ပြီးသုံးသပ်ရာမှာကိုးကားခဲ့ပါတယ်။
လူစားဖြစ်သည်ကိုအကဲဖြတ်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းမှာအောင်ဆန်းနဲ့ အောင်ဆန်းစုကြည်ကို
လူချင်းသားအဖဖြစ်တာနဲ့ နိုင်ငံရေးချင်းပါသားအဖဖြစ်ကြသ ယောင်ယောင်
လုပ်နေကြတာတွေကိုသူဝေဘန်ထားတယ်။ သူ့ ဝေဘန်ချက်ကို complimentary
သဘောဖြစ် တဲ့ကျနော်ရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုတော့အမှတ်အသားပြု (noted) တဲ့သူသုံးဦးရှိခဲ့ပါတယ်။
[မိုက်ကယ်အောင်သွင်၊ အဲဒီအချိန်ကပါရဂူတန်းတက်နေတဲ့သူ့ သားနဲ့- ဗိုလ်မှူးရဲထွဋ် (ယခုပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးဦးရဲထွဋ်) တို့ ပါ။]
သမိုင်းကို -အထူးသဖြင့်ကိုယ့်မျိုးဆက်နဲ့ သိပ်အလှမ်းမဝေးသေးတဲ့သမိုင်းကို -
(interpret) တာကိုစာဖတ်သက်နည်းနည်းရင့်လာတဲ့သူတွေအဖို့ အရသာမတွေ့ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အမှန်တရားအဖြစ်လက်ခံထားပြီးဖြစ်တဲ့အချက်အလက်တစ်ခု (a reigning orthodoxy) ရဲ့ခိုင်မာမှုကိုပြန်လည်စစ်ဆေးတဲ့ဆွေးနွေးချက် တစ်ခုခုပေါ်ထွက်လာရင်လဲ ယခင်ကဒီအချက်နဲ့ ပါတ်သက်လို့ အမှတ်တမဲ့နေခဲ့သူတွေအတွက်နွေခေါင်ခေါင်
သို့ သော်အချက်အလက်အသစ် - အဓိပ္ပါယ်ကောက်ပြမှုအသစ် (Re-interpretation of history) ကိုမျက် စေ့မှိတ်ငြင်းဆန်တာမျိုး-လက်မခံတာမျိုးမလုပ်ချင်တဲ့သူတွေမှာတော့
စာစုံအောင်ပြန်ဖတ်ရ၊ သမိုင်းနောက်ခံကို (historical context)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အခဏ်းကဏ္ဍ-အထူးသဖြင့်လွပ်လပ်ရေးဖခင် ဟူသောသတ်မှတ်ချက်ကိုပြန်လည်စီစစ်တဲ့သဘောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဟာစာဖတ်သူတွေကိုတော်တော်စိတ်ဝင်စားစေလိမ့်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးနဲ့ ပါသတ်သက်လို့ အဓိက အချက်အချို့ ကိုထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ -
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုမြန်မာ့လွပ်လပ်ရေးဖခင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရန်ဝန်လေးတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ Atlantic Charter (11941)အရအင်္ဂလိပ်ကကိုလိုနီများကိုလုံးဝ လွပ်လပ်ရေးပေးရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်လို့ ပါတဲ့။
ချာချီနဲ့ ဝီလဆင်ချိန်းတွေ့ ပြီးေ၀၀ါးဝါးလေသံနဲ့ ရေးခဲ့တဲ့ ဒီ Atlantic Charter ကိုဘယ်သူမဆို
စာတမ်း (Belfour Declaration - 1917) ဆိုတာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ဘူးတယ်။
အရှေ့ အလယ်ပိုင်းကအာရပ်တွေနဲ့ ဂျူးတွေဘယ်သူမှဂျာမဏီဘက်ကမပါအောင်
ဂျူးတွေကိုနိုင်ငံတစ်ခု ထူထောင်ခွင့်ပြုမယ်-အာရပ်တွေကိုလည်းမထိခိုက်စေရ ပါဘူးလို့ ဆိုထားတဲ့ေ၀၀ါးဝါးစာတစ်စောင်မျှပါဘဲ။
အထူးသ ဖြင့်အိန္ဒိယတိုက်ငယ်ကကိုလိုနီနယ်သားတွေကိုအင်ပါယာအတွက်အသေခံခိုင်းဘို့ ပါ။ (ရွှေဥဒေါင်းရဲ့ဝတ္ထုထည်း မက်ဆိုပိုးမီးယား(ဗြိတိသျှလက်အောက်ခံအီရပ်)မှာစစ်တိုက်ခဲ့ရတဲ့ “ဂျမဒါကိုကိုကြီး” တို့ လိုပေါ့။)
“restoration of self-government to those deprived of it” - ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးသားသူတွေ(စစ်ကြီးကြောင့်-ဂျာမဏီ -ဂျပန်တို့ ကြောင့်) ဆုံးရှူံးခဲ့ယင်စစ်မဖြစ်မီကအနေအထားကိုပြန်ဖြစ်စေရမယ်-ဒါဘဲ။
လွပ်လပ်ရေးရခဲ့ တဲ့နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ကျော်ရှိတဲ့အနက် ဆူဒန် (၁၉၅၆) မလေးရှား (၁၉၅၇) ဂါနာ (၁၉၅၇) နိုင်ဂျီးရီးယား (၁၉၆၀) တန်ဇန်နီးယား (၁၉၆၁) ယူဂန်ဒါ (၁၉၆၂) ကင်ညာ (၁၉၆၃)
ဇန်ဘီယာ (၁၉၆၄) နှင့်ဇင်ဘာဘွေ (၁၉၈၀) တို့ ဟာမြန်မာနိုင်ငံလိုပဲအရွယ်အစား (size, territory) တွေကအသင့်အတင့်ကြီးမားပြီး
သဘာဝသယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝကြတဲ့အတွက်သူတို့ ရဲ့လွပ်လပ်ရေးကိုအသေအကျေ
ပါကစ္စတန်၊ မြန်မာတို့ ဟာစစ်ပြီး နောက်ပိုင်းအင်္ဂလိပ်ကိုတကယ်လက်နက်ကိုင်
ဂန္ဓီရဲ့ Quit India, ဆူဘတ်စ် ချန္ဒရာဘိုစ့်ရဲ့ INA, အောင်ဆန်းရဲ့ BIA တို့ 
အနက်အောင်ဆန်းရဲ့ BIA ဟာတကယ့်စစ်ရည်ဝနေတဲ့လူသုံးသောင်း ဖြစ်တယ်။
ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အင်္ဂလိပ်နှင့်တကယ်တိုက်ခဲ့တဲ့ရွှေတောင်တိုက်ပွဲ (၁၉၄၁) မှာ
BIA ဗိုလ်ရန်နိုင် ရဲ့ မီးကျိုးမောင်းပျက်များသာကိုင်နိုင်တဲ့ (ragtag rifle and spear army) လူ ၁၃၀၀ ပါတပ်က အိန္ဒိယသို့အောင်မြင်စွာဆုပ်ခွာ နေတဲ့အင်္ဂလိပ်သံချပ်ကားတပ်မကိုတင့်ကားဆယ်စီးနှင့်
အမြောက်ကြီးနှစ်လက်ဆုံးရှူံးကာ၊ စစ်သည် ၃၅၀ သေကြေဒဏ်ရာရစေခဲ့ပါတယ်။
မိမိဘက်မှာစစ်ရေးကြွမ်းကျင်သူဟူ၍ အီကေဒါနဲ့ ဟီရာယာမာဆိုတဲ့ဂျပန်စစ်ဗိုလ်နှစ်ဦးသာ စစ်ရေးအကြံပေးအဖြစ်ပါခဲ့တယ်။(သူတို့ နှစ်ဦးစလုံးမြန်မာတွေနဲ့ အတူကျဆုံး)
အဲဒီ့နောက်ဂျပန်တော်လှန်ရေးမှာဂျပန်သုံးသောင်း(မဟာမိတ်တွေနဲ့ တိုက်လို့ ကျဆုံးတာမပါ)
တိုင်းဆယ်တိုင်း (ပုဂံ - ၁၉၆၄)မှာစာရင်းအတိအကျပြုစုဖေါ်ပြထားတယ်။
ဒီအချက်ကိုခုထိ ဘယ်ဂျပန်ပညာရှင်ကမှငြင်းချက်မထုတ်ဘူး။ စစ်ဦးစစ်ဖျားဒေသ
(overstretched) လဲဖြစ်တာမို့ မြန်မာဟာအာရှမှာဂျပန်အသေဆုံးနိုင်ငံဘဲ။
လည်းစစ်ပမ်းနေ၊အောင် ဆန်းကလည်းအင်အားကိုနောက်ခံပြုပီး (fromaposition of strength) ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ မှုကြောင့်သာဖြစ်တယ်။
မလေးရှားဟာ ၁၉၅၇ ခုနှစ် ကျမှလွပ်လပ်ရေးရတယ်။)အင်္ဂလိပ်ဟာကိုလိုနီတွေကို
သူဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ဗြိတိသျှဓနသဟာယ British Common Wealth (အခုတော့ရှေ့ 
က “ဗြိတိသျှ”ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုဖြုတ်လိုက်ပီ) ကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်။
အရှင်သခင်ဘ၀နဲ့ အသာစီးရခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနည်းပညာ တွေ၊ကုန်သွယ်စီးပွားရေး
လက်ပီးစစ်ရေးစီးပွားရေးအရထိမ်းချုပ်ထားရေးအစီအမံပါဘဲ။ ဒါကိုလုံးဝလက်မခံတဲ့အောင်ဆန်းကကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ်သပ်သပ်နေချင်လို့လွပ်လပ်ရေးယူတာလို့ သူ့ ကိုနားချတဲ့အိုင်စီအက်စ်ကြီးတစ်ယောက်ကို
မြန်မာပြည်ကတစ်ချို့ ခရစ်ယန်ဘာသာဝင်တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုတော်တစ်ချို့ ဟာ
အချို့ သောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဗမာများကဲ့သို့ ပင်ဘာသာရေးနှင့်နိုင်ငံရေးမကွဲပြားလှဘူး။
သူ့ စာအသွားအလာအရပြည်သူ့ တမန်အမည်ခံဆောင်းပါးရှင်ဟာကချင်တိုင်းရင်းသား
ဗမာဖြစ်တဲ့အောင်ဆန်းကိုအသိအမှတ်မ ပြုနိုင်တာကိုနားလည်ပေးလို့ ရပါတယ်။ စိတ်ထည်းကမကြည်ညိုတာကိုအတင်းဘယ်လိုမှကြည်ညိုခိုင်းလို့ မရ နိုင်ပါဘူး။
ဒါတင်မကယခုတိုင်ဆက်လက်လောင်ကျွမ်းဆဲ KIA နဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးကြောင့်ဗမာတွေ အားလုံးကိုသိမ်းကြုံးမုန်းလာတာကိုလည်းသဘာဝမကျသည့်တိုင်နားလည်ပေးလိုက်ပါ့မယ်။ ဒါပေမဲ့သမိုင်းကို ပြန်ပြီးအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တဲ့အထိအထူးသဖြင့်ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ သမားကိုစေတနာ့ရှင်အဖြစ်
ကတော့ခေတ်ကာလလူငယ်စကား နဲ့ ပြောရယင် “နဲနဲ ‘များ’ သွားပြီနော်” လို့ ပြောချင်တယ်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်လွပ်လပ်ခွင့်တွေရလာတဲ့အပေါ်မှာမှီပြီးအခုလိုအတွေးတွေရဲတင်းလာတာကောင်းပါတယ်။ လွပ်လပ်ခွင့်ကိုအလွဲသုံးပြီးအောင်ဆန်းဟာအချောင်သမားလားတို့ ပြည်တန်ဆာလုပ်ငန်းတရားဝင်ဖြစ်ရေး တို့ စတဲ့စတန့် တွေ (stunts) တွေလုပ်လာကြတာကတော့မသင့်တော်ဘူးပေါ့။ ရထားတဲ့အသစ်စက်စက် ဒီမိုကရေစီကလေးဟာအလွဲသုံးတဲ့လူတွေများလာယင်အရူးထောင်ဖွင့်ပွဲကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
အောင်ဆန်းအကြောင်းပြန်ကောက်ရယင် - သူ့ ခေတ်ကအရှေ့ တောင်အာရှမှာခေတ်ကိုရှေ့ ဆောင်နိုင်စွမ်းပြ နိုင်တာအောင်ဆန်းနဲ့ 
သဘောပေါက်တဲ့ကိုလိုနီအာရှသားဆိုလို့ အောင်ဆန်း၊ ဟိုချီမင်းနဲ ဆူဘတ်စ်ချန္ဒရာဘိုစ့်တို့ ပဲ ရှိတယ်။ အောင်ဆန်းဟာဗမာကိုကမ္ဘာကသိအောင်Burma’s Challenge ဆိုတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ရေးသွားယုံမကခုခေတ် ASEAN ရဲ့ရှေ့ တော်ပြေးလို့ ဆိုရမဲ့
Indochina Federation ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်ကတည်းကချခင်းခဲ့တယ်။
လွပ်လပ်ရေးမတိုင်မီတစ်နှစ် (၁၉၄၇) ဟာအောင်ဆန်းအတွက်ကောအဲဒီခေတ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့လူအားလုံးကိုပါဘယ်လိုလူစားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာစာမေးပွဲစစ်တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။ အသေးစိတ်ကို သတင်းစာဆရာဦးပုကလေးရဲ့ငါတို့ ဗိုလ်ချုပ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ
ဖတ်နိုင်တယ်။သူမကျဆုံးမီ နောက်ဆုံးလပိုင်းမှာပြောသွားတဲ့မိန့် ခွန်းဟာလဲလွပ်လပ်ရေးနဲ့ 
ထိုက်တန်တဲ့စိတ်ဓါတ်တွေရှိကြဘို့ ဒဲ့ဒိုးကြီးပြောသွားတာဘဲ။အဲဒီမိန့် ခွန်းဟာအခုလို
ဘာဖြစ်လို့ အောင်ဆန်းကိုအခုလိုအချောင်သမားလို့ လူတစ်ချို့ က
ဟုတ်ကဲ့ - အကြောင်းခိုင်ခိုင်မာမာရှိပါတယ်။
သူ့ ရဲ့မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ကိုအောင်ဆန်းလမ်းစဉ်လို့ ကိုအတိအလင်းကြေငြာပြီးနိုင်ငံရေး
အရတရားဝင်မှု (political legitimacy)ကိုရယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၂၆ နှစ်တာကာလမှာ
တိုင်းပြည်ကလက်တွေ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာကသူ့ ရဲ့အာဏာရှင်စံနစ်ကြီးသာဖြစ်နေတယ်။
သူ့ ကိုဖယ်ရှားတဲ့အခါမှာအသုံးချဘို့ သူ့ ထက်သမိုင်းရေးရာတန်ဘိုးကြီးမားတဲ့လူကို
ရှာမရဘူးဖြစ်ခဲ့ကြ တယ်။ (ဦးနု - ဗိုလ်လင်္ကျာစတဲ့အစဉ်အလာကြီးမား သူတွေတောင်ဦးနေ၀င်းကိုမယှဉ်နိုင်ခဲ့ကြဘူး။)
သားကြီးဖြစ်တဲ့အောင်ဆန်း ဦးကိုအသုံးချဘို့ စိတ်ကူးရကြတယ်။
ရှစ်လေးလုံးကာလအစပိုင်းမှာလူတိုင်းကအောင်ဆန်းဦးပြန်အလာကို မျှော်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့အောင်ဆန်းဦးကိုအားမကိုးရတဲ့အခါမှာတော့မရှိသုံးအဖြစ်နဲ့ မိခင်နေမကောင်းလို့အင်္ဂလန်ကခဏပြန်ရောက်နေတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပွဲထုတ်လာကြတယ်။
သမီးအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ထိပ်တိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အောင်ဆန်းထူထောင်ခဲ့တဲ့
တပ်မတော်နဲ့ အောင်ဆန်းရဲ့သမီးအကြားကပြဿနာမှာကွယ် လွန်သူအောင်ဆန်း
ဟာသေပြီးလို့ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်မှဝေဘန်ခံရတာဖြစ်လာရတယ်။
တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကအောင်ဆန်းကိုမသိကျိုးကျင်ပြုလာရလေလေဖြစ်လာတယ်။ အာဇာနည်နေ့ တွေကိုဝတ်ကြေ၀တ်ကုန်ကျင်းပခဲ့ကြသလိုငွေစက္ကူတွေပေါ်က
[ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားကိုကြည့်ယင်ဆူကာနိုရဲ့ သမီးဖြစ်တဲ့မေဃာဝါတီဆူကာနိုပူထရီဟာတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ရန်မဖြစ်တဲ့ အတွက်သမတရာထူးကိုရသွားခဲ့တယ်။နိုင်ငံခြားသားအထူးသဖြင့်ကိုလိုနီအရှင် သခင်ဟောင်းနိုင်ငံသားနဲ့ အိမ်ထောင်မပြုတာလဲပါမယ်။ ဒါတောင်ချက်ချင်းသမတမဖြစ်ဘဲ အစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် ကိုခဏသီးခံခဲ့ရသေးတယ်။]
မြန်မာပြည်မှာတော့စုကြည်နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ နေရယုံသာမကတဘက်မှာ
အမြင်မှာတပ်မတော်ကိုဗမာတပ်အဖြစ်ပဲမြင်ကြတယ်။ ဒီဗမာတပ်ကိုသိက္ခာချချင်ယင်အောင်ဆန်းကစပြီးပုတ်ခတ်ရမယ် - သူ့ ကိုသေးသိမ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ ယူဆပုံရတယ်။ ဒါတင်မကအောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်ရဲ့နိုင်ငံရေးအရည်အသွေးကလဲလူနည်းစုတွေအပါအ၀င်မြန်မာနိုင်ငံသား
အစောကြီးကတည်းကလူ့ ပြည်မှာမရှိတော့ပြီဖြစ်တဲ့အောင်ဆန်းကိုပုတ်ခတ်ဘို့ 
ဂန္ဓီ - ဟိုချီမင်း - မာရှယ် တီးတိုး - မင်ဒဲလားတို့ ကောအောင်ဆန်းလိုနောက်လူတွေ ကပြန်စီစစ်ပြီးအဆင့်လျှော့ချတာ (degraded) ခံခဲ့ကြရသလား။ ကျနော်မထင်ဘူး။ သူတို့ တိုင်းပြည်တွေမှာမြန်မာပြည်လိုပြည်တွင်းစစ်မရှိဘူး။ တစ်ချို့ ကအောင် ဆန်းလိုစစ်ရေးကောနိုင်ငံရေးမှာပါဦးမဆောင်ခဲ့ဘူး။
တစ်ချို့ ကအောင်ဆန်းလိုမာက့်စ်ဝါဒနဲ့ မပါတ်သက်ခဲ့ဘူး။
သူ့ ခေတ်သူ့ အခါတုံးက မာက့်စ်ဝါဒအမြင်ရှိနေမှနယ်ချဲ့ ကိုစံနစ်တကျနဲ့ 
အတာနဲ့ အကဲဖြတ်လို့ မမှန်နိုင်ဘူး။
သူ့ ခေတ်နောက်ခံကား (historical background) ပေါ်မှာတင်ပြီးသူနဲ့ ခေတ်ပြိုင်
ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့ အပေါ်ပြု ခဲ့တဲ့မှတ်ချက်တွေကသာမှန်ကန်တယ်။
အောင်ဆန်းရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုသူနဲ့ ထိတွေ့ 
ရှိနေတယ်။ နိုင်ငံရေးအရရန်ညှိုးကြီးတဲ့ဝင်စတန်ချာချီကလွဲလို့အားလုံးကသူ့ ကိုတလေးတစားရေးထားခဲ့ကြတယ်။
အဓိပတိနယ်ချဲ့ သမားကြီးဖြစ်တဲ့ချာချီက တော့မဟတ္တမဂန္ဓီကိုတောင်
လံကွပ်တီဝတ်ဖကီးကြီး (half naked fakir) လို့ ပက်ပက်စက်စက်ရေးခဲ့တယ်။
“နတ်နေကိုင်း” ကိုတော့မခုတ်သင့်ဘူး။ ကိုယ့်အချင်းချင်း
အဆင်မပြေတာနဲ့ ဘဲ မရှိကြတော့ပြီဖြစ်တဲ့ဘိုးဘွားတွေအထိ
Posted by Myint Shwe at 7:54 AM6comments